Shabakadda Amiirnuur – Page 268
Maqaallo Wararka Gudaha
Kadib markii uu 10 jirsaday dagaalka ay ciidamada Amisom kaga jiraan Soomaaliya kuna fashilmeen iney qabsadaan dalka oo dhan, taa badalkeedana go’aansadeen iney dib ugu laabtaan dalalkooda, ayaa waxaa madaxweyne Farmaajo soo wajahay culeys dhanka ammaanka ah. Shirkii ka dhacay madaxtooyada ee uu la qaatay madax goboleedyada waxa uu ku […]
Dowladda Kenya ayaa shaacisay in ay joojisay gaadiidkii dad weynaha ee isaga kala gooshi jiray Mandheera iyo Neyroobi kaddib markii ay kordheen weerarada ay Al-shabaab ka geysanayaan inta u dhaxeysa labada Magaalo. Tani waxay saameyn ku yeelatay dadka sida maalinlaha ah u isticmaala wadada sida:- dad weynaha caadiga ah, ardayda, […]
Sarkaal Ka Tirsan Wasaaradda Caafimaadka DF oo Qarax Lagula Beegsaday Muqdisho.
Qarax ayaa barqanimadii maanta magaalada Muqdisho lagula beegsaday sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda ra’iisulwasaare Kheyrre. Sarkaalkan ayaa isagoo gaarigiisa wata lagu weeraray wadada Maka-Almukarama gaar ahaan nawaaxiga Imagareeshanka, waxaana ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay inoo xaqiijiyeen inuu dhaawac halis ah gaaray sarkaalka oo lagu magacaabo Xirsi. Dhaawiciisa […]
Francisco Madeira oo Fadeexeeyay Warbaahinta Soomaalida.
Francisco Madeira oo ah Wakiilka Ururka Midowga Afrika ee oo shir jaraa’id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in ay ciidamadoodu billaabayaan iney isaga baxaan Soomaaliya isagoo sheegay in dabayaaqada sannadkan iyo bilowga sannadka soo socda ay dalalkooda u diri doonaan kumannaan askari. Qorshahan ayaa sida uu […]
Al-Shabaab: “15 Askari Ayaan Kenya Uga Dilnay Weerarkii Duleedka Mandheera” Aqriso.
Xarakada Al-Shabaab iyo dowladda Kenya ayaa natiijo isku dhow kasoo saaray weerarkii maalintii shalay ka dhacay degaanka Dabasiti ee dhacay duleedka magaalada Mandheera kadib markii weerar jid gal ah loo dhigay askar Bolis ah oo halkaa ku socdaalayay. Sarkaal ay soo xigatay idaacadda Andalus oo ku hadasha Afka Al-Shabaab ayaa […]
Maxaa Cusub Muxaadaraad
Dhageyso Muxaadaro Qayim Ah (Siyaasadda Islaamka Iyo Lidkeeda)
Bulsha weynta ku taxan bartan Amiirnuur.com, waxaan idiin soo gudbineynaa muxaadaro qayim ah oo uu jeedinayo Sheekh Nuur Mucallim C/raxmaan. Muxaadaradan ayaa waxa uu ku lafa gurayaa siyaasadda islaamka iyo midda kasoo hor jeeda ee lidkeeda ah, waxaana ku jira cilmi iyo xusuus fara badan oo ay tahay inaan ka […]
« Previous 1 … 266 267 268 269 270 Next »